Edit ID3 Tags toos ah, Beddelidda Tracks 'Information, labalaabka Track
Sida loo Edit ID3 Tags toos ah
Haddii maktabadda music aad si fiican u tagged, waxaa abaabulka noqdo hawl aad u fudud. Tracks ama playlists aan macluumaad ku filan la complicating karo gaar ahaan halka Author ama iyaga u ciyaaro. Dhab ahaantii, waa niyad dheeraad ah haddii aad u ogaan karaa in tiro ka mid ah kuwan raadkaygay waxaa lagu magacaabay si qaldan ama aan haysan magac dhammaan ama aan lagu soo abaabulay ee ay albums. Waxa uu xitaa noqon karaa complicating badan haddii sifayn ku playlists 'ama fanaaniinta aan la diyaarin dhammaataan. Stress noocan oo kale ah si fudud la suulin karin barnaamijyada kala duwan ee si toos ah u samayn ID3 tags tafatirka. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa faahfaahinta qiimo leh oo ku saabsan sida loo ID3 tags si toos ah saxaa.
Qaybta 1.Edit ID3 tags aad MP3 ururinta ee Lugood Apple
Qaybta 2.Edit ID3 Tags la TunesGo
Waa mid aad u fudud si aad u cusboonaysiiso kuwan raadkaygay album ama playlists la ID3 macluumaad sax tag, tusaale ahaan, artist, iyo album iyo sidoo kale tirada track via Lugood. Waxaad ku dari kartaa, ka saar ama wax ka bedel xogta ku saabsan tareenka ama heeso. Samee waxyaabaha soo socda:
Helitaanka Tracks Information
Fur Lugood ee. Copy playlists ama wadooyin albums galay Lugood ay si fudud u soo jiiday, oo iyaga tagtey. Samee Lugood inay xaqiijiyaan inaad ku soo bixi oo ku rakiban.
Si aad xaalkaa macluumaad album, xulo heeso ama playlists ama kuwan raadkaygay. Markaasuu iyaga ku xulan album.
Tubada (Control + Riix) ama si fudud xaq click ka dibna tubbada ah ' Hel Info '
Hadda, aad edit karaa, ka saar ama ku darto artist album, magaca artist ama sanad album la sii daayay. Si loo badbaadiyo isbedelada, tuubada ' Ok '
Photo 1,2: Helitaanka Macluumaadka Tracks, ayeey Album Information
Faalladaada Album Information
Si aad macluumaad ka bedel track, waxaad u baahan doontaa inaad doorato track kasta oo ka jaftaa 'Hel Info' si aad u hesho macluumaad ah track kasta.
Waxaad magaca karo, ku daro ama wax ka saari tirada track ee, horyaalka iwm Si uu uga badbaadiyo isbedel ah, ka jaftaa 'Ok'
Helidda Album Folder
Si aad u heshaan folder album, booqo 'Macintosh HD' ka dibna 'Users' ka dibna 'warqadda username' ka dibna 'Music' ka dibna 'Lugood' ka dibna 'Lugood Music' iyo ugu dambayntiina 'magaca Artist'
Jiid & hoos ama nuqul meel. Laga soo bilaabo halkan, waa ay fududahay in cadaadin oo ay ku jiraan dadka wax la wadaago. Sida in aad si fiican u dari kartaa albums ama iyaga wax ka bedel.
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aad isku daydo sixiddiisa garoonka, lakiin uma shaqeeyo. Haddii aad isku aragtid, dooro tareenka ka dibna tubbada (Control + Click) ama si fudud xaq ilamaha. Dooranaysaa 'Beddelaan ID3 tags' . Waxaad fursad u heysan doonto doorashada kala duwan 'Translate Characters qoraalka' . Dooro 'ASCII TO ISO Laatiin-1' . Save isbedel adigoo gujinaya 'Waayahay. " Tani waxay kala sooci doonaa dhibaatada.
Photo 3: Doorashada Translate Characters
Waa mid aad u lagama maarmaan ah si loo hubiyo in playlists ama raadkaagu leeyihiin oo dhan tags ID3 dhammaataan gundhig iyo sidoo kale hubinta kuwan raadkaygay ama macluumaad playlists 'waa sax. Tunesgo waa barnaamij loo sameeyo ID3 tafatir ku ool ah. Si aad u isticmaasho Tunesgo, waa in aad kala soo bixi oo ku xidh. Sidoo kale, hubi in haddii qalab aad jaanqaadi la.
Photo 4: Bilaabanaya Tunesgo
Keenista / Music Scanning ama Tracks
Isla markiiba barnaamijka la bilaabay, Lugood waxaa si toos ah u la marsiiyey by sidoo kale ku daray playlists ama tacks in ay maktabadda. Tallaabadan ayaa la sameeyaa xataa haddii aad ku dari ah wadooyin cusub marka aad furay barnaamijka.
Photo 5: Music Files, Doorashada Songs
Haddii aad ku badbaadi playlists ama kuwan raadkaygay ku fayl kale, waxa ay dajiyaan si ay u dajiyaan. Si aad u samayn tuubada this 'Music' oo nuqul ka heeso ama jiita iyo hoos u folder music ilaa maktabadaha ama si fudud u soo gudbin saxaarad.
Dawarsanayay, si uu u xaliyo 1D3 Tags
Si ID3 tags qamaar bilowdo, talaabada ugu horeysa waa in la ogaado gabaygii iyo tubbada 'Aqoonso Button.' Button sida caadiga ah loo aqoonsado songs soo doortay haddii aad go'aansato in aad doorato kuwan raadkaygay badan hal mar. Marka la diyaariyo, waa ay fududahay in la helo macluumaadka ku raad. Sidoo kale, lyrics si fudud lama soo baadhi karo.
Photo 6: Doorashada Songs ama Folder in Edit
Button Scan ku yaal madax waa mid aad u muhiim ah in qamaar Dufcaddii ee ID3 tags ee tareenka. Sidoo Waad ka hortagi kartaa heeso yaac iyo isticmaalkiisa.
Saar Tracks labalaabka
Tallaabada xigta waa Intaa waxaa dheer ee ID3 tags in kuwan raadkaygay. Dooro track aad rabto ka dibna tubbada 'codso.' Waxaad samayn ka dib
Photo 7: saar Tracks labalaabka
Iskaan iyo magaca Music Iyada oo aan sax ahayn Tags
Photo 8: iskaan iyo magaca Music Iyada oo aan sax ahayn Tags
Tafatirka Fields kala duwan
Photo 9: tafatirka Fields kala duwan
Haddii aad rabtid in aad ka mid ah macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan song ama mareenka gaar ah ka dibna waxaad u baahan tahay si ay u badalaan ama ay bedelaan macluumaadka. Tusaale wanaagsan waa marka isticmaali image cusub ee farshaxanka. Sidoo kale, waxaad go'aansan kartaa inaad ka mid ah faahfaahinta gaar ah ama fariin inay wadada. Tani waxay si fudud lagu samayn kartaa adigoo gujinaya 'Edit " (icon tan hoose lagu arki karaa). Markaas, macluumaad macluumaad kasta oo aad rabto in aad track aad door bidayso.
Sixidda Music daboolida / Images / Logo
Photo 10: tafatirka Fields kala duwan
Dhab ahaan waa in aad ku faraxsan yahay ka dib markii uu soo socda, kuwaas oo talooyin ku saabsan sida loo edit raadkaagu ama maktabadda music by shaqaalaysiiyo kuwaas oo laba hab. Sababta sababta ay dadku ugu door bidaan Tunesgo waa in ay sidoo kale loo isticmaali karaa sida ciyaaryahan track. Waxaad ka ciyaari karaa ama u dhagaysan jecel raadkaagu via barnaamijka.
Sida loo dayactir ID3 Tags tayo leh, Tracks Update 'Artist, Title, sifayn iwm
Album Art maqan? Mushkiladii loo xaliyo on Mac
Sida loo tag Music Si fudud ku Mac
Top 7 macruufka, Android APP in Download daadkii
20 Free Music Download Shabakadaha
Top 50 Sheet Piano Easy, warqada Piano Begginer music
Sida loo RIP Audio CD la VLC?
> Resource > Music > Sida loo Edit ID3 Tags toos ah, Beddelidda Tracks 'Information, labalaabka Track